जसलाई कोभिडले फोक्सो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍यायो- फिचर - कान्तिपुर समाचार
जसलाई कोभिडले फोक्सो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्‍यायो
श्रावण २१, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — २८ वर्षीया मायरा रामिरेज एक दुर्लभ फोक्सो प्रत्यारोपणपश्चात घर फर्किएकी छिन् । उनी कुनै ठूलै दीर्घरोग लागेर प्रत्यारोपणको स्थितिसम्म पुगेकी भने होइनन् । कोभिड–१९ संक्रमणले फोक्सोलाई पूर्णरुपमा बिगारिदिएपछि उनको बाँच्ने विकल्पका रुपमा प्रत्यारोपण बाँकी रहेको थियो ।
नर्थवेस्टर्न मेमोरोयिल हस्पिटल, सिकागोको आकस्मिक कक्षमा बसिरहँदाको क्षण मात्र मायरा राम्ररी सम्झिन्छिन् । त्यसबखत उनलाई थप उपचारका लागि भेन्टिलेटरमा राखिँदै थियो । आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिन उनले परिवारलाई त्यहाँ बोलाएकी थिइन् । उनकी आमाले मेडिकल प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने थियो ।
रामिरेज अप्रवाससँग सम्बन्धित एक ल र्फममा अधिवक्ताको सहायकका रुपमा काम गर्छिन् । कोभिड–१९ संक्रमणबढेसँगै उनले घरबाट काम गरिरहेकी थिइन् । खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामान पनि घरमै मगाउने गरेकी थिइन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो थियो । तर, उनलाई अटोइम्युन रोग ‘न्युरोमाइलिटिस अप्टिका’ भयो । यो रोगले स्नायु प्रणालीमा समस्या पुर्‍याउँछ । उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न औषधि खान्थिन्। जसले उनको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बनाइदियो । सायद त्यसले उनी कोरोना भाइरसको जोखिममा परिन् ।
उनी २ हप्ताभन्दा बढी बिरामी परिन् । उनले आफ्नो लक्षणका बारेमा कोभिड हटलाइन मार्फत परामर्श लिइरहेकी थिइन् । सञ्चो नभएपछि एकदिन अस्पताल पनि गइन् । तर, भित्र नपसी फर्किइन् । सोचिन्,‘आफैं निको होला ।’
अप्रिल २६ मा उनको तापक्रम १०५ डिग्री फरेनहाइट पुग्यो । उनी यति कमजोर भइन् कि हिँड्न पनि नसक्ने भइन् । साथीले उनलाई अस्पताल पुर्‍याए । चिकित्सकले भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बेला भइसकेको बताउँदा उनलाई के भइरहेको छ पत्तो नै थिएन । उनले भेन्टिलेटरमा मात्रै ६ हप्ता बिताउनुपर्यो । उनको रक्तनलीमा अक्सिजन पुर्‍याउनका लागि मेसिनको आवश्यकता पर्‍यो ।
‘मैले सोचेको थिए म त बढीमा दुई तीन भेन्टिलेटरमा रहन्छु र निको हुन्छु भएर फर्किनेछु,’ उनले भनिन्, ‘त्यो समय त मेरो लागि डरलाग्दो सपना जस्तै थियो ।’ त्यसताका उनले निकै डर लाग्दो सपना देखेको बताउँछिन् । धेरैजसो सपनामा आफूलाई डुबेको देख्थिन् । कहिले परिवारले विदाइ गरेको देख्थिन् त कहिले डाक्टरले ‘अब तिमी मर्दैछौ है’ भन्ने गरेको पनि देखिन् ।
रोगयति कठोर थियो कि ब्याकटेरियाको संक्रमणले उनको मुटुमा प्वाल नै पारिदियो । फोक्सोमा क्षति पुगेपछि उनको रक्तसञ्चार प्रणालीमा पनि समस्या देखिन थाल्यो । त्यसले गर्दा उनको कलेजो तथा मुटु पनि जोखिम पर्‍यो । नर्थ क्यारोलिनामा रहेका उनका परिवारलाई डाक्टरले फोन गरेर भने, ‘छोरीको अन्तिम विदाइ गर्नका लागि सिकागो आउनुस् ।’ खबर सुन्नासाथ उनलाई भेट्न उनकी आमा र दुई जना दिदी आउने भए ।
तर, रामिरेज भने रोगसँग लडिरहिन् । कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भइन् र प्रत्यारोपण गराउनेको लिस्टमा परिन् । त्यसको दुई दिनपछि जुन ५ मा१० घण्टा लामो कष्टकर शल्यक्रिया भयो । शल्यक्रियापछि बिउझिँदा आफूलाई निकै नै प्यास लागेको उनले बताइन् ।कसैसँग बोल्नसक्ने अवस्था थिएन उनको । ‘यति धेरै ट्युबहरु जोडेको देख्दा आफ्नै शरीर आफ्नो होइन भन्ने लागेको थियो,’ उनले भनिन् ।
खासमा फोक्सोको प्रत्यारोपण गर्नका लागि शल्यक्रिया गरिएको कुरा उनलाई थाहै थिएन । उनलाई त्यस विषयमा डाक्टरहरुले केही भनेका पनि थिएनन् । प्रत्यारोपण गरिएको जानकारी होसमा आएको धेरै दिनपछि मात्रै गराइएको थियो । ‘म केही गर्नसक्ने अवस्थामा थिइँन । मैले सास फेर्नका लागि संघर्ष गरिहरेकी थिएँ र म एकदमै तिर्खाएको थिएँ र एकहप्तापछि मात्र कृतज्ञ महसुस गर्न सक्ने भएँ,’ उनले भनिन् ।
उनलाई पुनः संक्रमण हुनसक्ने भयले शल्यक्रिया पश्चात परिवारलाई समेत भेट्न दिइएको थिएन । बिहीबार जुन ३० मा प्रेस कन्फेरेन्समार्फत आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्,‘सबैभन्दा गाह्रो समय त म योसँग एक्लै लडिरहेकी थिएँ ।’ उक्त समय आफूले भय, चिन्ता र डरसँग लडेको बताइन् । र, अन्ततः केहीदिन पश्चात मात्रै आमालाई भेट्न पाइन् ।
उनी अमेरिकाको पहिलो कोभिड संक्रमित हुन्, जसको दोहोरो फोक्सो प्रत्यारोपण गरिएको छ ।अमेरिकामा कोभिड संक्रमणका कारण कम मानिसमा फोक्सोमा असर परेको छ । ती मध्ये एक हुन् रामिरेज । ‘अर्को अस्पतालमा मलाई उपचार गरिएको भए मेरो उपचार अघि बढ्दैनथ्यो होला र म मर्थें होला,’ उनले भनिन् । प्रत्यारोपण भनेको निको नहुने गरी पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको फोक्सोलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधिका रुपमा मात्रै लिइन्छ ।
पछिल्लो वर्ष अमेरिकामा २७०० फोक्सो प्रत्यारोपण गरिएको छ । कुनैपनि बिरामीको फोक्सोले फेरि काम गर्नसक्छ भनेर चिकित्सकहरुले प्रत्यारोपण गरिहाल्दैनन् । प्रत्यारोपणको लागि बिरामी बलियो हुनुपर्छ, कुनैपनि संक्रमणबाट मुक्त भएको हुनुपर्छ र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने हुनुपर्छ । कोभिड– १९ जस्तो नयाँ रोग फैलिरहँदा चिकित्सकहरुमा अझै यसलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने भनेर सिकिरहेका छन् ।
डा. अंकित भरत रामिरेजका सर्जन हुन् । उनका अनुसार प्रत्यारोपणले कोभिड–१९ को उपचारमा नयाँ आयाम दिनसक्छ । त्यसो त प्रत्यारोपण कहिल्यै पनि संक्रामक रोगको उपचारका लागि प्राथमिकतामा पर्ने विधि भने होइन । यसलाई उपचारको विधिका रुपमा ग्रहण गर्न नै केही समय लाग्न सक्छ ।
जुलाई ५ मा डा. अंकितले नै लेक जुरिचका ६२ वर्षीय ब्रायन कुहनको शल्यक्रिया गरेका थिए । उनको पनि फोक्सोको समस्या थियो । प्रत्यारोपण गर्नुअघि कुहनलाई सय दिन लाइफ सपोर्ट मेसिनको माध्यमबाट उपचार गरिएको थियो । उनकी श्रीमती नेन्सी कुहन भन्छिन्,‘बिरामी हुनुभन्दा अघि कुहन कोभिडलाई एकदम सामान्य रुपमा लिन्थे ।’ कुहनले आफ्नो अवस्था स्वीकार्दै भन्छन्,‘मेरो कथाले तपाईंलाई एउटा पाठ के सिकाउँछ भने कोभिडलाई कहिल्यै पनि मजाकको रुपमा नलिऔँ ।’
रामिरेजले उपचार गरेको उक्त अस्पतालमा दुई जना अरु बिरामी पनि प्रत्यारोपणको पर्खाइमा रहेका छन् । एक जना सिकागोका रहेका छन् भने अर्का वासिङटन डिसीका छन् ।
डा. टायगो माचुकाका अनुसार गत शुक्रबार फ्लोरिडाको गेनेसभाइलमा अवस्थित युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडा हेल्थ सेन्ड्समा पनि एक जना कोभिड संक्रमितको दोहोरो फोक्सो प्रत्यारोपण गरिएको थियो । त्यसैगरी अरु पनि अस्पतालहरुमा पनि यस्ता रेफर केसहरु आएका छन् । कोभिडका बिरामीहरुलाई अरु पनि गम्भीर रोगहरु देखिएको छ ।
डा. भरत थोरासिक सर्जरीका प्रमुख हुन् र फोक्सो प्रत्यारोपण कार्यक्रमका सर्जिकल निर्देशकसमेत हुन् । डा. भरतका अनुसार केही अस्पतालहरु प्रत्यारोपणको सल्लाह दिनको लागि एकदम लामो समय पर्खिने गरेका छन् । उनका अस्पतालमा रिफर भइ आएका एक बिरामी प्रत्यारोपणको लागि योग्य थिए तर, अचानक उनको फोक्सोमा अत्यधिक रक्तश्राव र मिर्गौला फेल भएपछि शल्यक्रिया सम्भव नै भएन । ‘यस्ता विकल्पका लागि पहिल्यै सोचिनुपर्छ ताकि ढिलो नहोस्,’ डा. भरत भन्छन् ।
उनका अनुसार केही केसहरूमा बीमाकर्ताहरूले शल्यचिकित्सा कभर गर्न वा बिरामीको स्थानान्तरणको लागि यात्रा गर्न भुक्तान गर्न हिचकिचाएकोले समेत ढिलाइ भएको छ।
डा. माचुका भन्छन्, ‘यो हाम्रो लागि नयाँ क्षेत्र हो । यो चिकित्सकहरुका लागि चुनौतीपूर्ण छ । किनकी कुन बिरामी खासमा प्रत्यारोपणका लागि योग्य छ र कतिबेला शल्यक्रिया गर्ने भनेर थाहा पाउनै कठिन छ । हामीले प्रत्यारोपण छिट्टै गरिहाल्दैनौ किनकी कोभिडका बिरामी फोक्सोको समस्याबाट निको भइ फेरि राम्रो अवस्थामा आउन पनि सक्छन् । तर, हामी त्यो मौका पनि गुमाउन चाहदैनौं ताकी पछि प्रत्यारोपण व्यर्थ होस् वा बिरामी एकदम सिकिस्त होस् ।’
डा. माचुकाका अनुसार कहिलेकाहीँ पर्याप्त मात्रामा पुर्नस्थापनाले पनि प्रत्यारोपणको लागि योग्य मानिएका कोभिडका बिरामीहरुलाई छिटो निको बनाएको उदाहरण छन् ।
कोभिडका कारण फोक्सोमा धेरै क्षति पुगे पश्चात प्रत्यारोपण गर्न अप्ठ्यारो हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । धेरैजना बिरामीहरु अन्तैबाट रेफर भएर आएका हुन्छन् । जहाँ जोखिमयुक्त शल्यक्रिया गरिन्छन् र बिरामीको लागि पनि राम्रो सेवा सुविधा होस् । प्रत्यारोपण गरिएका कुहन पनि अर्के अस्पतालबाट रिफर भइ नर्थवेस्टर्न अस्पताल आएका थिए ।
उनी बिरामी हुनुभन्दा पहिले आफिसको लागि फुल टाइम काम गर्थिन् । र, आफ्ना दुइटा साना कुकुरहरुसित दौड्दै खेलेर समय बिताउने गर्थिन् । अब उनको दैनिकी फेरिएको छ ।
अझै पनि उनलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । थोरै दुरी मात्र हिँड्न सक्छिन् र कुर्सीबाट उठ्न पनि अरुको सहारा चाहिन्छ । नर्थक्यारिलोनामा काम गर्ने उनकी आमाले छोरीको हेरचाहका लागि जागिरबाट केही समय बिदा लिएकी छिन् । रामिरेजले आफ्नो नयाँ फोक्सोलाई प्रयोग गर्न सिकिरहेकोर दिनदिनै बलियो हुँदै गएको बताउँछिन् । उनी आफ्नो काममा फर्किन आतुर छिन् । तर, उनलाई सामान्य अवस्थामा फर्किन अझै कति समयलाग्ने हो थाहै छैन । परिवारले उनलाई सहयोग गरिरहेका छन् र उपचारको बिल तिर्नका लागि साथीहरुले राहत जुटाइरहेका छन् ।
रामिरेज दृढ हुँदै भन्छिन्, ‘मलाई लाग्छ मसँग उद्देश्य छ । हुनसक्छ म जस्तै अवस्था भोगिरहेका अन्यलाई मेरो अनुभव बाँडेर मद्दत गर्न सक्छु ।’ डा. भरतका अनुसार रामिरेजको अवस्था ठिक छ । किनकी उनको उमेर धेरै भएको छैन । उनले जीवनभर एन्टि–रिजेक्सन औषधिको सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी प्रत्यारोपण गरिएको फोक्सो अझै पनि रिजेक्ट हुने सम्भावना रहन्छ । डा. भरतले २० वर्षसम्म पनि प्रत्यारोपित फोक्सोले काम गरेको देखेका बताउँछन् । र,यदि रिजेक्ट भइहालेमा बिरामीले दोस्रो प्रत्यारोपण गराउन पाउँछन् ।
‘सायद अब उनी तंग्रिन थाल्नेछिन् । पुरै निको भएपछि उनको स्काइडाइभिङ गर्न जाने इच्छा छ । हामी सम्भवत उनलाई केही महिनामा नै लानेछौं,’ डा. भरतले भने ।
-यो सामाग्री न्यूयोर्क टाइम्सबाट लिएर अनुवाद गरिएको हो ।
प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ १५:००
कुन जिल्लामा कहाँ र कहिलेसम्म निषेधाज्ञा ?
काठमाडौँ — कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले १४ जिल्लाका विभिन्‍न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यस्तै, ६ जिल्लाहरुमा पूर्ण रुपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । जिल्लाहरुमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
सप्‍तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, पर्सा, बारा र बाँके जिल्लाभरी पूर्ण रुपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सर्लाही, पर्सा र बारामा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा गरिएको छ भने बाँकेमा साउन २४ गतेसम्म, सप्तरीमा साउन २६ गतेसम्म र स्याङ्जामा साउन २३ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
यस्तै, धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका केही क्षेत्रहरुमा साउन २५ गतेसम्म निषेधाज्ञा गरिएको छ ।
नुवाकोट पूर्व बाहैवेर भन्ज्याङ,पश्चिम नयाँ चौतारा,उत्तर बागेश्वरी भन्ज्याङ र दक्षिण पोखरी डाँडा र हिलेटोलमा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।
मोरङको विरानगर महानगरपालिकामा साउन ३० गतेसम्म,महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका र महोत्तरी गाउँपालिकामा साउन २१ गतेसम्म र दार्चुलाको मर्मा गाउँपालिकामा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा अर्को आदेश नभएसम्म र अर्जुनधारा नगरपालिका क्षेत्रमा साउन २२ गतेसम्म, सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर ६, ७ र ८ मा अर्को आदेश नभएसम्म् र बझाङको थलारा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र केदारस्युँ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७मा साउन ३२ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन थालेपछि निषेधाज्ञा गरिएको हो । मंगलबारसम्म मुलुकभरमा २१ हजार ९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने ५८ जना कोरोनाको संक्रमणबाट निधन भएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ १४:४४
चिया गफबाट सुरु भएको संकटाको ‘अम्ब्रेला स्ट्रिट’
एक सपनाको अवसान
कथा नेपालको पहिलो बन्जी मास्टरको
ओली–थापा सहकार्य कसरी भयो सम्भव ?
टिप्पणी : फेरि परीक्षामा देउवा
०१७ साल भाग-३ !
अपडेटः शनिबार, १० माघ, २०७७ । १४ : १० बजे